Abakhiqizi be-Pc Sheet & abahlinzeki - China Pc Ishidi Factory
Igumbi le-Aluminium Sun
Ishidi Roof Ishidi
Ikhwalithi ephezulu ye-Polycarbonate ...
Umklamo Omuhle Wekhaya Garde ...
Smooth ebusweni Pultruded FR ...
Zu Bonai lukathayela Fiberg ...
Zu GRP fiberglass Plastic ...
Izinto zokwakha zePolycarbonate Plastic / Hollow Sheet
Izici Zomkhiqizo Izinga lokungena: izinga lokungena eliphakeme, elingafinyelela ku-25% no-86% ngemibala ehlukene. Impact resistance: ukuqina komthelela kukholamu elingenalutho izikhathi ezingama-80 kunezengilazi. Amandla: Ngemuva kwamahora angama-4,000 okusheshisa izivivinyo zokuguga, i-Yi iyi-2 ne-LT ingu-0.6% Ngenxa yalokho, ngemuva kweminyaka eyi-10 yokusetshenziswa, amazinga aphezulu okungena kanye namazinga aphansi aphuzi angagcinwa. Ukuvikelwa emisebeni ye-ultraviolet: Izibani zelanga ze-PC zilungiselelwe ngezendlalelo ezintathu ezihlangene ...
IBhodi Ephakeme Yamandla Ebhodi Eliphezulu lePolycarbonate
Ishidi le-PC elenziwe ngokwezifiso eliphakeme le-Polycarbonate PC
Isevisi yethu yangaphambi kokudayiswa kwensiza: 1. Idizayini eyenziwe ngokwezifiso 2. Uphenyo lomkhiqizo 3. Nikeza amasampula kungakapheli izinsuku eziyi-7. Isevisi yokudayisa ngemuva 1. Isikhathi sokulethwa esifushane 2. Imiyalo yokufaka kanye nokwenziwa kwemikhiqizo nezinhlelo ezifanayo. Ngokwengeziwe, uma kuceliwe, amarekhodi okungenani amahlanu (5) angaphambilini, awomuntu ngamunye futhi ngokulinganayo ...
Onke amakhasimende ethu azothola uhlu lwamanani nesipho esingu- $ 100. Sicela ushiye umyalezo wakho futhi uzozwa ngemuva kwamahora angama-24.
IKHELIIGongcun, iDacheng, iLangfang City, China